Ny fomba nomerika amin'ny hosodoko menaka Jeremy Mann | Famoronana an-tserasera
Tsy te ho diso fandray aho, ilay hosodoko solika lavitra ny nomerika izany, fa rehefa nahita ny sarin-dohan'i Mann lohateny voalohany aho, ny zavatra azoko voalohany dia ny nijereko ireo asa nomerika natao tamin'ny Photoshop. Izany no fahatsapako voalohany fa tsy noho ny tsy fahampian'ny teknika, fa satria maro ny singa nomerika tsara indrindra dia misy karazana kapoka tsara ny namboarin'i Mann tamin'ny sanganasany sary.
Ny gaga lehibe dia tonga taty aoriana rehefa Nanontany momba ny asany sisa aho ho talanjona amin'ny fombany manokana sy ilay nantsoiko hoe "nomerika." Tsy olona hamorona zavatra mitovy amin'izany aho, fa ny sary izay natao tamiko fotsiny no nafindrako rehefa nandinika ny asan'ity mpanao hosodoko ity aho.
Ary ireo tsipika matevina izay tena marim-pototra amin'ny antsipiriany sasany, dia nanjary tsara rehefa entin'ny fientanam-po i Mann izany dia eo amin'ny sary ny tanany.
Tanana vitsivitsy izay maro nandoko ny hafa ny mpanao hosodoko kilasika ho vitan'izy ireo ary izany dia midika ho fanaintainana nify lehibe ho an'ny mpanao hosodoko maro hafa.
Tsy i Mann ihany dia natokana ho talanjona amin'ny fombany ary ilay endrika vehivavy tsy afa-mihetsika sy tsy mety maty, fa ao amin'ireo firafitr'ireo sary an-tanàn-dehibe dia hitantsika ny sangan'asa kanto tsara indrindra ao aminy.
ny sasany seho an-tanàn-dehibe avelako ianao inona no hitanao avy amin'ny anao manokana tranonkala izay ahitanao ny asany sisa.
Un mipetraka ao Oakland, Kalifornia ny mpanao hosodoko ary nahazo mari-pankasitrahana marobe izy ary notanisaina ho iray amin'ireo mpanakanto 25 rahampitso avy amin'ny famoahana malaza sasany.
Manana ny anao koa ianao Facebook, na dia tsy mamoaka ny ankamaroan'ny sangan'asany aza izy. Soa ihany fa ananantsika ny instagram aiza no toa izany dia mety kokoa ny mamoaka ny sasany amin'ireo sangan'asany vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny fomba manokana amin'ny "dizitaly" amin'ny hosodoko menaka Jeremy Mann